भारतीय राजनीतिक दलमा प्याज आतंक
काठमाडौं । गत साता प्याजको भाउ फेरि एकपटक भारतीय अखबारका शीर्ष समाचार बन्यो। बीबीसी मराठीका जान्हवी मुलेले यो तरकारी किन यति धेरै राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली हुने गर्छ भनेर जवाफ खोजेकी छन्।
भारतीय परिकारमा निकै प्रयोग हुने प्याजलाई गरिबको तरकारी पनि मानिन्छ। साथै यसले चोरी निम्त्याउनेमात्रै होइन यसको तलमाथि हुने भाउका कारण भारतका शक्तिशाली नेताको राजनीतिक जीवननै समाप्त समेत पारिदिन सक्छ। त्यसैले यो हप्ता ती नेताहरू केही चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै छ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा यसको भाउ चुलिएको छ। प्याजको भाउ भारतमा अगस्टदेखि बढिरहेको छ। त्यतिखेर भारु २५ मा एक किलो प्याज आउँथ्यो। अहिले त्यति प्याजको लागि भारु ८० तिर्नुपर्छ।
जनआक्रोश निम्तिने डरमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्याजको निर्यात रोकिदियो। त्यसले भाउमा केही कमी आउने ठानिएको थियो। र कम भयो पनि। बिहीवार महाराष्ट्रको लसलगाउँस्थित एसियाको सबभन्दा ठूलो प्याज थोक बजारमा यसको भाउ प्रतिकिलो भारु ३० मा ओर्लिएको थियो। तर सबैजना खुसी छैनन्।
विस्तारै वृद्धि भइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रमा मूल्य बढ्दा खेरि आम उपभोक्ता क्रुद्ध भएका थिए। तर यसको मूल्य खस्किएपछि भने निर्यातकर्ता तथा महाराष्ट्रका किसानहरू रिसाएका छन्। त्यहाँ केही सातामा निर्वाचन हुँदैछ। प्याजका कारण भान्साहरूमा मात्रै पारो चढेको छैनस यसको निर्यात प्रतिबन्धका कारण भारत र छिमेकी बाङ्ग्लादेशबीचपनि व्यापार सम्बन्ध बिग्रिएको छ।
प्याज किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण ?
प्याज गरिब भारतीयका लागि एक नियमित तरकारी हो। धेरै भारतीय परिकारमा यो अत्यावश्यक हुन्छ। 'महाराष्ट्रमा यदि तरकारी पाइएन भने वा महँगो भयो भने मानिसहरू रोटी र प्याज खान्छन्,' खानेकुराको इतिहासका जानकार डा मोहसीना मुकादम भन्छिन्।
हो, दक्षिण तथा पूर्वी भारतमा अन्यत्र जस्तै धेरै प्याज प्रयोग हुँदैन। अनि केही धार्मिक समुदाय त यो खाँदै खाँदैनन्। तर धेरै जनसङ्ख्या भएका उत्तरी राज्यहरूमा प्याज निकै लोकप्रिय छ। अनि तिनै राज्यहरूले धेरै सङ्ख्यामा सांसद चुनेर पठाउँछन्।
'संघीय सरकारमाथि उत्तर भारतका उपभोक्ताको प्रभाव ज्यादा छ। त्यसैले अन्यत्रका उपभोक्ताले धेरै गुनासो नगरेपनि यदि उत्तर भारतका उपभोक्ताले गुनासो गरे भने सरकार दबावमा पर्छ,' नीति अनुसन्धानकर्ता मिलिन्द मुरुग्करले बताए। प्याजको भाउ घट्यो भने त्यसले खासगरि महाराष्ट्र, कर्नाटक अनि गुजरात राज्यका किसानलाई असर पर्छ।
'किसानका लागि प्याज भनेको एटिएम मेसीन जस्तै हो जसले निश्चित रकम उनीहरूलाई दिलाउँछ। उनीहरूको घरायसी बजेट प्याजको भाउमा निर्भर हुन्छ,' प्याजसम्बन्धी समाचार पछ्याउने पत्रकार दिप्ती राउत भन्छिन्। प्याजले चोरहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ। सन् २०१३ मा प्याजको भाउ अकासिँदा केही चोरहरूले प्याज बोकेको ट्रक चोर्ने प्रयास गरेका थिए जसलाई प्रहरीले रोकेको थियो।
राजनीतिज्ञहरू किन प्याजलाई ध्यान दिन्छ ?
सरल रूपमा भन्दा, प्याजको भाउ यदि धेरै बढ्यो वा घट्यो भने नेताहरू चिन्तित हुन्छन् किनभने त्यसले या त आम उपभोक्ता या किसान क्रुद्ध हुन्छन्। प्याज यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि यसको प्रसङ्ग निर्वाचनको प्रचार अभियानमा पनि प्रयोग हुन्छ।
दिल्ली राज्य सरकारले सेप्टेम्बरमा प्याजको भाउ अकासिँदा त्यसलाई सस्तोमा बेचेको थियो। स्मरणीय छ कि यहाँका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल आगामी वर्ष निर्वाचन सामना गर्दैछन्।
विगतमा सन् १९८० मा इन्दिरा गान्धीले चुनाव जितेको बेला उनको प्रचार अभियानले बढ्दो प्याज मूल्यलाई अघिल्लो सरकारको विफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।